महिलालाई स्वस्थ रहन डा. एलिसाको १० सुझाव !सबै पढ्नुहोस । – E Kutumba
महिलालाई स्वस्थ रहन डा. एलिसाको १० सुझाव !सबै पढ्नुहोस ।
By ईकुटुम्ब On Mar 18, 2021 0
१.तनाव निर्मूल पार्नुहोस्ः अधिकांश महिला अनावश्यक रुपमा तनाव लिइरहेका हुन्छन्। तनावले प्रजनन् क्षमतादेखि डिप्रेसन, ‘एन्जाइटी’ र मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्छ। त्यसैले सकेसम्म तनाव लिनु हुँदैन। तनावरहित हुन हरदम कोसिस गर्नुपर्छ। तपाईंले लिएको तनावले तपाईंको काम बन्दैन बरु स्वास्थ्य बिगार्छ। आफूलाई तनाव नहुने उपाय खोज्ने र निरन्तर अवलम्बन गर्ने गर्नुहोस्।
२ डाइटिङ नगर्नुहोस्ः स्वस्थकर भोजनको अर्थ घरिघरि एक ग्लास वाइन, एक टुक्रा चकलेट वा केकको एक टुक्रा खानु होइन, बरु भोजनमा संयम र सुधार ल्याउनु हो। थोरै प्रोटिनयुक्त, स्वस्थ्यकर फ्याटयुक्त, कार्बोहाइड्रेट र फाइबर मिश्रित भोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारण डाइटिङ होइन समय मिलाएर सन्तुलित भोजन गर्नु उत्तम हुन्छ।
४. पर्याप्त व्यायाम गर्नुहोस्ः महिलालाई मुटु बलियो पार्न र रोगप्रतिरोध क्षमता बढाउन ‘वेट बियरिङ एक्सरसाइज’ ९शरीरको वजन वहन क्षमता बढाउने व्यायाम० सातामा पाँच दिन गर्नुपर्छ। जस्तै– नृत्य, जगिङ, कम्तिमा ३० मिनेट हिँड्नु, पौडी खेल्नु आदि। व्यायामले ‘ओस्टोपोरोसिस’जस्ता हाडसम्बन्धी रोग, मुटुसम्बन्धी रोग, क्यान्सर मधुमेहजस्ता रोगबाट जोगिन सघाउँछ। व्यायामले महिलामा आत्मविश्वास बढाउनुका साथै आफूप्रतिको धारणा पनि सकारात्मक बनाउने हुनाले मानसिक स्वास्थ्य सबल हुन्छ।
५. प्रजनन्बारे बेलैमा विचार गर्नुहोस्ः ३० वर्ष हाराहारीका अधिकांश महिलालाई गर्भवती हुँदा खासै समस्या आउँदैन। तर, सामान्यतया ३२ वर्षको उमेरपछि महिलाको प्रजनन् क्षमता घट्न थाल्छ। त्यसैले आफ्नो करियर बनाउन सन्तान ढिलो जन्माउने सम्बन्धमा चिकित्सकसँग परामर्श गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ९अहिले विदेशमा महिलाको ‘अन्डा’ वा विवाहित भए ‘भ्रुण’ नै पनि फ्रिज गर्ने प्रविधि आइसकेको छ, तर महँगो छ।०
७. बर्सेनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्ः २१ वर्ष पुगेका महिलाले ३–३ वर्षमा पाठेघरको मुख ९सर्भाइकल० को क्यान्सर’ परीक्षण ‘प्याप स्मेयर टेस्ट’ गराउनुपर्छ। ३०–६५ वर्ष उमेर समूहका महिलाले ५–५ वर्षमा प्याप स्मेयर टेस्टसँगै ‘एचभिपी’ टेस्ट गर्नुपर्छ। ६५ वर्षभन्दा माथिका महिलाले भने चिकित्सकले क्यान्सरको सम्भावना न्यून बताए टेस्ट गरिरहनुपर्दैन। तर, सक्रिय यौनजीवन बिताइरहेका महिलाले भने गनोरिया, भिरिंगीजस्ता सरुवा रोगको बर्सेनि परीक्षण गराउनुपर्छ भने एचआइभीको पनि परीक्षण गराउनुपर्छ।
८ . स्वस्थ यौन सम्पर्कः स्वस्थ यौन सम्पर्कले तनाव घटाउँछ भने दीर्घ ९क्रोनिक० रोगको जोखिम पनि न्यून पार्छ। तर, यौनबाट आनन्द आउन छोड्यो भने त्यसले थप तनाव दिन्छ। यौन सम्पर्कमा सुख्खापन वा पीडा हुन थाले चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ।
१० जेनेटिक परीक्षणः स्तन क्यान्सर, ‘ओभ्यारियन क्यान्सर’ र विभिन्न दीर्घरोगको जोखिमको मात्रा थाहा पाउन र रोकथाम गर्न हिजोआज ‘जेनेटिक’ परीक्षण गर्न सकिन्छ। चिकित्सकहरूले महिलामा यस्ता रोगको जोखिम थाहा पाउन जेनेटिक परीक्षणको सहायता लिन थालेका छन्। त्यसैले चिकित्सकसँग परामर्श गरी जेनेटिक परीक्षण गरी यस्ता रोगबाट बेलैमा जोगिने उपाय गर्न सक्नुहुन्छ। @स्वास्थ्यखबर
सैनिक मुख्यालयभित्र आगलागी
२४ सदस्यीय एमाले संसदीय बाेर्डमा झलनाथ खनाल र माधव नेपालसमेत मनाेनित